PC Sheet Extrusion Line - China PC Sheet Extrusion Line Mutengesi, Fekitori -Jwell
Bindu, nzvimbo yekuvaraidza, kushongedza uye mukoridho pavilion; Yemukati neyekunze kushongedza mune yekutengesa chivakwa, keteni rusvingo rwechizvino uno rweguta chivakwa; yakajeka mudziyo wekubhururuka, hwindo remhepo pamberi pemudhudhudhu, ndege, chitima, iyo steamer, ngarava yepasi, mauto nemapurisa nhoo, dumba renhare, kushambadzira chikwangwani, kushambadza kwedzimba dzemarambi, nzira yekumhanya uye yepamusoro peguta. Chikamu chekudzivirira skrini.
PC chemarata bhodhi ine hunhu hwemamiriro ekunze akanaka kuramba chivakwa, kukanganisa kusagadzikana, kupenya kwakanyanya kwechiedza.
Inoshandiswa zvakanyanya mudenga rezvivakwa uye zvivakwa zviri nyore, senge madziva anokakama, minda yekusvetuka, chiteshi chekuzorora matende uye zvichingodaro.
3D Kudhinda Wire / YeMotokari Tiny Tube Kuchekesa Mutsara